धुलोमा बसेर पढ्छन् बालबालिका – Sulsule
सुलसुले २०७७ माघ २२ गते १४:५३ मा प्रकाशित
गत भदौ १७ गते भुजीखोलामा आएको बाढीले विद्यालयको भवन बगाएपछि बालबालिकालाई खुला चौरमा राखेर पढाउन शिक्षक बाध्य छन् । “बाढीले नामोनिसान नराखी विद्यालय लग्यो, कुनै विकल्प नभएपछि खुला चौरमा राखेर पढाउनुपरेको हो”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर घर्तीमगरले भने ।
उनले अहिले विद्यालयसँग कक्षाको समय जनाउका लागि घण्टीसमेत नभएको पीडा सुनाए । कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने सो विद्यालयमा अधिकांश दलित समुदाय र न्यून आय भएका परिवारका बालबालिका पढ्छन् । यसै त कमजोर हालतमा रहेका बालबालिकालाई प्राकृतिक विपत्तिले झन मार थपेको छ ।
“राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत दुई कोठे भवन बन्दैछ, त्यसैलाई बारबुर पारेर भए पनि कक्षा चलाउनुपर्ला”, उनले भने, “तत्काललाई अस्थायी प्रकृतिको टहरा बनाउने भनेर सोचेका थियौँ तर कतैबाट स्रोत जुटेन ।” प्रअ घर्तीमगरले स्थलगत अवलोकनपछि विद्यार्थीको अवस्था देखेका त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ र प्रदेशका सांसदले कुनै सहयोग नगरेकामा दुःखेसो व्यक्त गरे ।
नगरपालिकाले भने ३० थान बेञ्चका लागि बजेट दिएपछि अहिले काम भइरहेको विद्यालयले जनाएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत बनिरहेको भवन वैशाखसम्म सक्ने लक्ष्य छ । सोही भवनमा तला थपका लागि अमेरिकामा रहेका प्रवासी नेपालीबाट रु. २५ लाख बजेटसमेत नगरपालिकाको राहत कोषमा जम्मा भइसकेको जनाइएको छ ।
भवन बनाउने जग्गा खरिदका लागि पनि सोही ठाउँबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका प्रवासीले रु. ३० लाख विद्यालयलाई उपलब्ध गराएका थिए । शिक्षक जमुना पुनम मगरले चिसो भुइँमा राखेर बालबालिकालाई पठाउँदा साह्रै पीडाबोध हुने गरेको बताए ।
“धेरै गाह्रो अवस्था छ, न बोर्ड छ, न शैक्षिक सामग्री, घाम हुञ्जेलसम्म जेनतेन पठाउँछौँ, त्यसपछि यहाँ बस्नै सकिँदैन, विद्यालय भवन छिटो बन्दियोस् भन्ने लागेको छ”, उनले भने”, “पानी परी हालेमा विद्यार्थीले ओत लाउने ठाउँसम्म छैन ।”
कक्षा २ मा अध्ययनरत अङ्कित विकले दुवाल गाउँदेखि एक घण्टा हिँडेर विद्यालय आउने गरेको राससलाई बताए । जाडो याममा धुलो भुइँमा बसेर पढ्दा गाह्रो भइरहेको सुनाए । उक्त विद्यालयमा बाढीमा अभिभावक गुमाएका नौ बालबालिका पढ्छन् । कूल १५० मध्ये अधिकांश बालबालिका बाढीबाट प्रभावित परिवारकै छन् । प्रअ घर्तीमगरलगायत अन्य शिक्षकको परिवार पनि बाढीबाट प्रभावित छन् । प्रअ घर्तीमगरले विद्यालयले भोगिरहेको समस्यामा सम्बद्ध पक्षबाट बेलैमा ध्यान पुग्नुपर्ने र उचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।
नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धनप्रसाद पोखरेलले विद्यालय पुनःनिर्माणलगायत शैक्षिक सुधारका काममा नगरपालिकाकै नेतृत्वले पहलकदमी लिनुपर्ने बताए । “बाढीपीडित राहत कोषमा पनि रकम जम्मा भएको छ, त्यसलाई पनि परिचालन गर्ने र अन्य स्रोत पनि जुटाएर काम अघि बढाउनुपर्छ”, उनले भने ।
नगरपालिकाको राहत कोषमा देशविदेशबाट गरी हालसम्म झण्डै रु. दुई करोड ५० लाख जम्मा भएको छ । उक्त रकम बाढी प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनामा खर्च गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि पुनःनिर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि सरकारले पनि बागलुङलाई विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनःनिर्माण थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।